Resadresaka nifanaovana tamin'i Beatriz Martínez, CEO an'ny hibolivia.travel
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Resadresaka nifanaovana tamin'i Beatriz Martínez, CEO an'ny hibolivia.travel
Febroary 3, 2018
HiBolivia.travel dia Tour Operator / DMC tonga marobe izay ampidirin'ny ekipa olona liana. Miaraka amin'ireo fitsangatsanganana natao manokana sy fandaharana izay ahitana ireo zava-dehibe indrindra ao Bolivia, dia mikendry ny hanome aingam-panahy ireo mpandeha ho tonga any amin'ity firenena maro karazana sy tena izy ity izy ireo.
.Travel: inona no mampiavaka ny orinasanao ary avy aiza ianao no mipetraka?
Orinasa monina any La Paz, Bolivia izahay, ary manokan-tena amin'ny fanomezana fitsangatsanganana sy serivisy manokana. Miavaka amin'ny famolavolana programa noforonina ho amin'ny toerana samihafa toa an'i Bolivia.
.Travel: Iza no tena mpihaino anao?
Ny mpihaino tena kendrenay dia ireo mpandeha mitady serivisy manara-penitra sy manokana. Ny fitsidihanay manokana dia mamela anay hanome fiheverana manokana ho an'ireo mpandeha anay.
Copacabana - Vista des Calvario
.Travel: Ahoana no hamaritanao ny mombamomba anao ary inona ny soatoavinao?
Ny tanjonay voalohany dia ny hanome aingam-panahy ireo mpandeha ho tonga any Bolivia amin'ny alàlan'ny fanolorana traikefa miavaka sy serivisy manara-penitra ary mikolokolo sy manaja ny planeta misy antsika. Izahay dia manolo-tena amin'ny fizahan-tany maharitra tompon'andraikitra, mitantana ny asanay amin'ny lafiny sosialy sy tontolo iainana. Mampiasa olona avy amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana izahay, mampiroborobo ny asa aman-draharaha sy ny fizarana tombony azo. Ny fanoloran-tenantsika amin'ny faharetana dia notohanana sy voamarina tamin'ny loka Sustainability Certificate navoakan'ny Travelife, izay nihaona tamin'ny fitakiana fiaraha-miasa rehetra.
.Travel: Andao hiresaka ny karazana fitsangatsanganana sy toeran-kaleha izay amidinao sy izay tadiavina indrindra.
Eny, lasa i Bolivia irery no tanjona lehibe indrindra, ary tsy ampahany fotsiny amin'ny "fonosan'ny firenena marobe", toy ny taloha taona lasa izay. Ny antony? Firenena tena maro karazana izy miaraka amin'ny sary masiaka indrindra, harena voajanahary ary kolontsaina miaina marina. Io no faritany nentim-paharazana indrindra any Amerika atsimo, satria teratany ny ankamaroan'ny mponina ao aminy ary mitahiry ny fomban-drazany.
Ny fandaharanay dia misy ny zava-dehibe indrindra ao Bolivia: Salar de Uyuni (Salt Flats), Lake Titicaca (Isla de Sol), La Paz, Sucre, Potosí, Tiwanaku, Madidi National Park (Amazon Rainforest), Mission Jesuit, ary koa Cusco ary Machupicchu any Peroa. Nanjary manam-pahaizana mampifandray an'i Bolivia sy Peroa (ary ny mifamadika amin'izany). Mazava ho azy, iray amin'ireo toerana itadiavana indrindra ny Salar de Uyuni mahatalanjona.
.Travel: ianao izao no mpamatsy fitsangatsanganana natao ho an'i Bolivia, ary mazava ho anao fa tia ny firenenao ianao. Ahoana no nahatratraranao an'io toerana io, ary tamin'ny fomba ahoana ary oviana no nanombohany?
Nanokana ny fiainako manontolo aho hampiroboroboana an'i Bolivia ho toerana fizahan-tany. Nanomboka niasa tamin'ny sehatry ny fizahan-tany aho efa 3 taona lasa izay, ary izany dia nahafahako nahazo traikefa sarobidy sy laza malaza.
Tao amin'ny tetikasako farany, Hi Bolivia !, Nanangona ekipa matihanina tompon'andraikitra sy mahay mamorona aho mba hahitana fomba vaovao hanolorana serivisy fizahantany. Ny aingam-panahiko dia avy amin'ny famoronana traikefa tsy hay hadinoina ho an'ireo mpandeha, ary ny fampiharana ny traikefa azo nandritra ireo taona maro lasa.
. Fitsangatsanganana: Inona ireo fironana sy fivoarana misy fiantraikany amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny orinasanao ankehitriny?
• Fitsangatsanganana sy hetsika atao amin'ny traikefa
• Fitsangatsanganana maharitra
• Niova ho finday ny fihetsiky ny mpanjifa
• Porofo ara-tsosialy
Pikantsary an'ny tranokala HiBolivia
.Travel: ny paikady fampiroboroboana ny fizahan-tany mahomby dia mitaky fananana tranokala manintona sy mahomby. Ahoana no mampiavaka ny tranonkalanao? Manana torohevitra momba ny mpamatsy fialantsasatra hafa ve ianao?
Mikasika ny tranonkalantsika dia afaka milaza izahay fa manandrana mitazona izany ho tsotra sy mazava. Niezaka nampiditra ny fampahalalana tena manan-danja indrindra momba an'i Bolivia sy ny serivisinay izahay. Miezaka ny mandeha mahitsy amin'ny resaka izahay, manalavitra ny fampahalalana be loatra izay mety hiafara amin'ny fikorontanana amin'ireo mpandeha. Ny zavatra asehonay dia hevitra momba ny karazana fitsangantsanganana sy traikefa azonay noforonina, saingy tsy manakatona na mametra ny tolotra ataonay fotsiny amin'ireo dian-tongotra ohatra izahay. Na izany aza, mikasa hamolavola endrika lehibe indray izahay amin'ny ho avy fohy.
.Travel: Ahoana ary oviana ianao no nahalala momba .travel ary nanomboka niara-niasa taminay? Inona no fampandrosoana?
Izahay dia nitady anarana domain an'ny orinasanay, ary tsikaritray ny fanitarana .travel vaovao. Tianay fa ny fanitarana dia mety tsara amin'ny orinasam-pandraharahana. Ho fanampin'izay, hitanay fa mora ny misafidy ny tena anarana tadiavinay satria tototry ny sehatra .com tanteraka. Fotoana kely taty aoriana dia nisoratra anarana domain hafa izahay, bolivian.travel, mba hampitomboana sy hanatsara ny paikadinay SEO.
.Travel: ny fisafidianana ny sehatra / marika mety amin'ny Internet no dingana voalohany mankany amin'ny fahombiazana amin'ny Internet. Raha ny fahitanao azy, inona ireo tombony lehibe atolotry ny sehatra .travel amin'ny tranokalanao sy ny orinasanao?
• Tombontsoa maharitra sy maharitra amin'ny faritra SEO.
• Fanitarana mifanentana amin'ny asantsika sy ny mombamomba antsika.
• Vintana lehibe kokoa hisafidianana ny anaran'ny domaine ilainao hatramin'ny anarana domain .com no tena tototry.
Fitsangatsanganana hatao any Hawaii: The Diamond Head Theatre dia manolotra zazavavy tetiandro
Miketriketrika ny mpandeha fiaramanidina, miady amin'ireo mpikarakara ny sidina, manandrana miditra ao amin'ny vala